ရခိုင်မှာ လူ ၆၅၀၀ နီးပါး ကွာရန်တင်းဝင်၊ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ၆၀ ခန့်တွေ့
ရခိုင်မှာ လူ ၆၅၀၀ နီးပါး ကွာရန်တင်းဝင်၊ ကိုရိုနာ ဗ...
21 พ.ค. 2563 - 21:14 น.
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူ ၆၅၀၀ နီးပါး ကွာရန်းတင်းဝင် နေပြီး ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် စောင့်ကြည့်သံသယလူနာပေါင်း ၆၀ ခန့် တွေ့ရှိထားတယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ရခိုင်မှာ ကိုဗစ် -၁၉ ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက်ခံရသူ ၂ ဦး တွေ့ရှိထားပြီး အဲဒီသူတွေကတော့ တောင်ကုတ်နဲ့ သံတွဲတို့က ဖြစ်ပါတယ်။
ကွာရန်တင်း ဝင်နေသူတွေထဲမှာ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိပြီး ၂၁၈၇ ဦးက နေအိမ်မှာ ကွာရန်တင်းဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ ၄၃၀၆ ဦးက ရပ်ရွာအခြေပြု ကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာ ရှိနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူက ပြောပါတယ်။
ဟိုတယ်ကွာရန်တင်း အဖြစ်နဲ့ နေထိုင်သူတွေ လည်းရှိနေတယ်လို့ ဒေါက်တာစိုးဝင်းပိုင်က ရှင်းပြပါတယ်။
ရခိုင်ရောက် မလေးရှားပြန် နှစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးစတွေ့
ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုမရှိစေရေးအတွက် မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာတွေအလိုက် ကွာရန်တင်းစင်တာတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး ခရီးသွားပြည်သူတွေနဲ့ နေရပ်ပြန်လာသူတွေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်း အစိုးရဘက်က ပြောပါတယ်။။
" စောင့်ကြည့်သံသယ လူနာက ၆၀ ပဲ ရှိတယ် "လို့ ဒေါက်တာ စိုးဝင်းပိုင်က ပြောပါတယ်။
အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကိုတော့ ၂၈ ရက်အသွားအလာကန့်သတ်ထားပြီး ရပ်ရွာအခြေပြုစင်တာတွေမှာ နေတဲ့သူတွေကို ၂၁ ရက်ထားရှိပြီး ပြန်ထွက်လာရင်လည်း အဲ့ဒီလူတွေကို သူတို့ရဲ့နေအိမ်မှာ ၈ ရက်ထပ်မံ ကန့်သတ်ပေးထား တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ အဲ့ဒီ ကွာရန်တင်းစင်တာတွေကို ကျေးရွာ ရပ်ကွက်တွေ အတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြေခံပညာစာသင်ကျောင်း တွေမှာ ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဇွန်လအတွင်းမှာ ကျောင်းတွေကို ပြန်လည်ဖွင့်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ကျောင်းဆောင်တွေကို ပညာရေးဌာနကို ပြန်လည်လွှဲပြောင်း အပ်နှံကြဖို့ မေလ ၁၃ ရက် ရက်စွဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
စာသင်ကျောင်းတွေမှာဖွင့်ထားတဲ့ ကွာရန်တင်းစင်တာတွေကို ဇွန်လလယ်မှာ ပြန်အပ်ရမှာ ဖြစ်လို့ အဲ့ဒီအချိန် ရခိုင်မှာ ကွာရန်တင်းစင်တာ အခက်အခဲဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်း အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ မြောက်ဦးမြို့နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ အမိန့်စာမှာတော့ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ အခြေခံပညာကျောင်းတွေကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အပြီးအပ်နှံပေးရမှာဖြစ်ပြီး အသစ်ရောက်လာတဲ့ နေရပ်ပြန်လာသူတွေကို အဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာ ဆက်မထားကြဖို့နဲ့ မြို့နဲ့ မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပိုင် အဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန လက်အောက်က တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ ဒီဂရီကောလိပ် အဆောက်အအုံတွေမှာ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ် ကြဖို့ ညွှန်ကြားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
"ရွာတွေမှာဆိုရင် စာသင်ကျောင်းမှာ မထားရင် ထားမယ့်နေရာမရှိဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဆိုလည်း အိမ်သာတွေမရှိဘူး။ ဒီတိုင်းဆိုရင် ဟိုဘက်တွေက လူတွေလည်းထပ်ရောက်လာရင်တော့ တော်တော်ဆိုးဝါးလာနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိတယ် "လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းဒေသမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ် မြို့နယ်တွေကို ရောက်နေတဲ့ မလေးရှားပြန် နှစ်ဦးမှာ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ့တယ်လို့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက မေလ ၁၉ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်း မလေးရှားနိုင်ငံကပြန်လာသူ ၁၄ ဦးရှိနေပြီး သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ်က ပိုးတွေ့လူနာနှစ်ဦးနဲ့အတူ ပြန်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပြီး သူတို့က ရောဂါပိုးမတွေ့ရဘူးလို့ မြောက်ဦး ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီလူတွေဟာ မေလ ၁၁ ရက်က အစိုးရရဲ့ ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဥ်နဲ့ ရောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ မေလ ၂၀ ရက်ကလည်း မလေးရှားက လူ ၁၀၀ကျော် လောက် လေယာဥ်နဲ့ ထပ်ပြီး ရောက်လာခဲ့ပါတယ် ။
မလေးရှားပြန်လာသူတွေထဲက ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့တာ ၉ဦး ရှိပြီးတော့ ၂ ဦးက ရခိုင်ကဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းတွေက နိုင်ငံခြား ပြန်လာသူတွေဟာ စစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာ ဝင်ထွက်သွားလာနေတာရှိပြီးတော့ တချို့လည်း စခန်းတွေမှာ အတူရောနေကြတယ်လို့လည်း အကူညီပေးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေထံ ကနေ သိရပါတယ်။
ဒီလူတွေကို စခန်းတချို့မှာ သီးသန့်ခွဲ ထားတာလုပ်နိုင်ပေမယ့် အများစုမှာတော့ မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ အစည်းအရုံး REC က ပြောပါတယ်။
ရခိုင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်း ၁၂၈ ခုမှာ ၃ ခုမှာ တော့ မိသားစုဝင်တွေဆီ ရောက်လာနေတဲ့ နိုင်ငံခြားပြန်တွေ အတွက် သီးသန့်အဆောင်တွေ စီစဉ်နေပါတယ်လို့ REC က ဧပြီလဆန်းက ဘီဘီစီကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်က ကိုယ့် အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် ပြန်ဝင်လာသူ ၈၀ ဝန်းကျင်ကိုတော့ လှဖိုးခေါင် ကြားစခန်းမှာ သီးခြား စောင့်ကြည့် ကွာရန်တင်းထား ရှိတယ်လို့ မောင်တော ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ဦးမောင်အုန်း က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မလေးရှားက ပြန်ဝင်လာသူ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား တချို့လည်း ဒုက္ခသည် စခန်း တချို့မှာ ဝင်ရောက် နေထိုင်နေတာ ရှိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်နေပေမယ့် ဒါကို တော့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က သီးခြား အတည်ပြု ပေးတာတော့ အခု အချိန်အထိ မရှိသေးပါဘူး။
อัลบั้มภาพ ရခိုင်မှာ လူ ၆၅၀၀ နီးပါး ကွာရန်တင်းဝင်၊ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သံသယလူနာ ၆၀ ခန့်တွေ့